I-NAIROBI WEST SUITES eduze kwe-NAIROBI CITY CENTRE - I-Airbnb
I-NAIROBI WEST SUITES eduze kwe-NAIROBI CITY CENTRE
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Achieng
Gcina noma usifinyelele ku- +254722420520 ukuze uthole leli fulethi elinefenisha yesimanje eNairobi West estate lingaphandle komgwaqo welangata futhi liwuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza i-JKIA futhi cishe imizuzu emi-5 ukusuka esikhumulweni sezindiza iWilson. Kuyibanga lokuhamba ukuya e-Nairobi CBD futhi lingaphansi kwe-10mins ukushayela epaki kazwelonke lapho zonke i-safaris zenzeka khona maphakathi nedolobha laseNairobi. Indawo ivikeleke kahle njengoba inkundla yebhola endala kunazo zonke e-kenya ingaphesheya komgwaqo
Ifulethi lifakwe kahle ngekhishi, ifriji kanye nompheki one-ovini ukuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukwenza ukudla ngesikhathi uhlala. Ifulethi linezokuphepha eziqinile futhi uma ufika uzozizwa usekhaya njengoba leli bhilidi lihlala abantu abangaphezu kuka-50 abavela kwamanye amazwe kanye nezivakashi nsuku zonke. Ifulethi linezokuphepha eziqinile futhi kunendawo yokupaka ngaphakathi kwenkomponi uma kuzoshayela. Uma kwenzeka usebenzisa i-uber noma itekisi bangakubeka kalula esangweni bese u-gate-man akungenise.
4.72 · 99 okushiwo abanye
Imininingwane engaphezulu kokuthi +254722420520 Ifulethi liseNairobi West okuyindawo emaphakathi kakhulu eNairobi. Cishe i-10mins ukushayela esikhumulweni sezindiza i-JKIA futhi iyibanga lokuhamba ukuya e-Nairobi CBD. Itholakala emgwaqeni odumile wakwaLangata okuyindawo yeNairobi National safari Park, isikhungo sezindlulamithi kanye nethempeli lezindlovu. Umgwaqo uLangata waziwa futhi ngamakilabhu awo anempilo futhi uyindawo yezindawo zokudlela eziphuma phambili zezivakashi kanye neklabhu - Indawo yokudlela ye-carnivore. Lokhu Okufanele uvakashelwe uma use-nairobi futhi uhamba ngemizuzu emi-5 ukusuka efulethini. Ifulethi futhi liseduze ne-T-Mall enakho konke ongakudinga okubandakanya ukuhwebelana kwe-forex, izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, ama-salon, abagundi, izitolo zezikhumbuzo njll.
Ngihlala ngixoxa lapha noma ocingweni futhi nge-whatsapp +254722420520